Iyada oo fikirku bilaabmaa afar-geesoodka saddexaad.
Quaternary-ga ugu horreeya: miyir (xanuun), dhaqdhaqaaq (taurus), walax (gemini), neef (kansar), waxay ku taal adduunka summada. Laba-geesoodka labaad: nolosha (leo), qaab (virgo), galmo (maktabad), iyo damac (scorpio), waa hababka oo ay mabaadiida adduunka noumenal waxaa lagu muujiyey dunida ifafaalaha muujiyey. Dunida cajiibka ah ee la muujiyey waxaa loogu yeeraa jiritaanka neefta wuxuuna ku dhammaadaa shaqsiyad. Afar-geesoodka saddexaad, oo ka bilaabaya fikirka, wuxuu ka kooban yahay fikir (sagittary), shaqsiyad (capricorn), nafta (aquarius), iyo doonis (pisces).
Maaddaama noloshu ay tahay bilowga geedi socodka dhisida jirka ee dareenka dibedda, sidaasoo kale fikirku waa bilowga howlaha dhismaha jirka ee dareenka gudaha.
Fekerku waa isku buuq maskaxeed iyo rabitaan. Maskaxda neefta ayaa ku dhacda jidhka aan hagaagsanayn ee rabitaanka qofka, rabitaankuna wuxuu ku yimaadaa sidii qaab bilaa qaab ah, wuxuu isku daraa neefsashada, waa la siiyaa qaab wuxuuna noqdaa fikir.
Fikradaha ayaa gala jirka oo kaliya xarumaha qaarkood. Dabeecadda fikirka ayaa lagu garan karaa shaqada xarunta ay ka gasho. Tirada iyo iskudarka fikradaha ayaa aad uga tiro badan ugana kala duwan malaayiinta qof ee ay ka yimaadeen, laakiin fikradaha oo dhan waxaa lagu kala saari karaa afar madax. Kuwani waa jinsi, aasaasi ah, shucuur ahaan, iyo caqli ahaanba.
Fikradaha dabeecadda galmada ayaa kiciya oo soo gala xaruntaas, iyaga oo ku shaqeynaya firfircoonaanta qorraxda iyo kicinta xubnaha gobolka caloosha, waxay u soo baxaan sida neef qabow oo qalbiga ku socota. Hadday galaan meesha waxay u kacaan sidii qaab muuqaaleed oo cunaha ah ka dibna waxay u gudbaan madaxa halka loosiiyay - si cad oo waadax ah sida horumarka shakhsigu u oggolaanayo. Marka qofku dareemo kicitaan xagga galmada wuxuu ogaan karaa in xoogaa saameyn ah ay ku leeyihiin isaga. Hadduu eryo ama ka leexdo fikirka waa inuu diidaa cunaqabataynta markuu weydiisanayo
Xagga sare ayaa iftiin ah, xagga hoosena waa nolosha. Mar labaad amarku wuu isbedelaa, oo hadda, iyada oo loo marayo fikirka hamiga leh, kuwan waxaa lagu muujiyey adduunyada nolosha iyo qaabka, galmada iyo rabitaanka, iyo fikirka laftiisa, waxaa loo beddelaa fikir xagga iftiinka. SHAQAALAHA. gelitaanka wadnaha, iyo inaad dareento qalbiga jacaylka jiritaanka qofka yahay gudahood Jirka, ama isaga oo u rogaya fikirka ugu sareeya miyir qabka kaas oo uu awood u leeyahay inuu gaaro oo ugu yeerayo joogitaankiisa. Dareenka ayaa markaa u gudbi doona mid ka mid ah hamiga iyo sarreynta, ka dibna nabad. Way ka sahlan tahay in fikirka la beddelo halkii laga fogeyn lahaa. Fikir lama dilo karo hal mar sida mararka qaar si khalad ah loo rumeysan karo. Waa laga yaabaa in la kaxeeyo laakiin waxay ku noqon doontaa si waafaqsan sharciga baaskiilka. Laakiin haddii loo diido in mar kasta oo ay ku soo noqoto ay si tartiib tartiib ah u lumaan ayay awooddu ku dhammaan doontaa.
Fikradaha dabeecadda aasaasiga ah waxay jirka ku galaan xudunta iyo ubaxyada maqaarka. Fikradaha aasaasiga ahi waa kuwa cadhada, nacaybka, xaasidnimada, masayrka, damaca, gaajada iyo harraadka, iyo kuwa ka farxiya shanta xubnood ee garaadka, sida hunguriga, ama arkida jahwareer. Waxay ku dhaqmaan qoraxda cadceedda waxayna dhiiri geliyaan geedka dareemayaasha, xididkiisuna wuxuu ku yaal xarunta galmada, iyo laamihiisa ku yaal qoraxda qorraxda, ama waxay ku ciyaaraan geedkaas dareemayaasha, xididdada maskaxda ku jira, oo leh laamo ku yaal iftiinka qoraxda.
Fikradahan aasaasiga ah waxaa lagu dhaqmaa oo awood lagu siiyaa xubnaha caloosha waxayna kacaan wadnaha halkaasoo, haddii ay cunaqabatayn helaan, madaxa ayey u kacaan, qaab rasmi ah ayey leeyihiin waxaana loo diraa mid ka mid ah furitaanka sida isha ama afka, Haddii kale ay hoos u soo dhacaan, jidhka khalkhal geliyaan oo, iyagoo saameyn ku yeeshay dhammaan atamyadooda, waxay keenaan inay uga jawaabaan falkooda. Awood kasta oo aasaasi ah ama fikir xun oo sidaas ku helo soo-gelidda xuddunta ayaa la beddeli karaa adoo adeegsanaya maskaxda isla mar ahaantaa fikir qeexan oo ku saabsan dabeecad ka duwan, ama adoo u beddelaya fikirka mid ka mid ah jacayl aan ikhtiyaar u ahayn sida horay loo soo sheegay; haddii kale fekerku wuxuu noqon doonaa mid lagu xoojinayo, iyadoo la siinayo foomka iyadoo la eegayo awoodda shaqsiga uu u leeyahay inuu ka fikiro, oo loo diro adduunka inuu ku hawlgalo kuwa kale ee oggolaanaya.
Fikradaha dabeecadda dareenka bini-aadamka ee qofka ayaa qalbiga soo gala iyada oo loo maro furitaanka iyo xarumaha naasaha. Waa maxay fikradaha shucuureed (mararka qaarkood loo yaqaan dareenka), sida ugu wanaagsan ayaa loo fahmi karaa iyadoo la tixgelinayo qulqulka dadka qaarkiis ay ku hayaan ka soo horjeedidda aragtida daadinta dhiigga, ama arka saboolnimada ama silica dadka kale markii si toos ah loola xiriiro murugadaas oo kale, laakiin iloobo waxa ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan ee araga iyo dhawaqdu u baaba'aan, ka dib jahwareer diimeed, maskaxeedkii dib u soo nooleynta, xamaasada dagaalka, naxariis darrada aan macquul aheyn, iyo dareenka dadka kacdoonka badan. Marka loo eego dabeecadaha shucuurta waxay ka soo baxaan wadnaha ilaa gobolada hoose, ama kacaan oo qaab ku yeeshaan madaxa halkaasna waxaa loogaga qaaday kor u kac iyo awood. Noocyada fikradaha iyo aragtiyaha oo dhan waxay raadsadaan gelitaanka madaxa maxaa yeelay madaxa waa gobolka caqliga ah halkaas oo aragtiyada lagu soo bandhigo qaab fikradaha firfircoonna dib loo habeeyo, la macneeyo oo la qurxiyo. Madaxa wuxuu leeyahay toddobo furitaan: sanka, afka, dhegaha, iyo indhaha, kuwaas oo, ay weheliso maqaarka, u kala horreeyaan shanta arrimood ee ay u yaqaanaan kuwii hore sida dhulka, biyaha, hawada, dabka, iyo kuwa kale, oo u dhigma kuwaas oo ah dareenkeenna urinta, dhadhaminta, maqalka, aragga, iyo taabashada. Waxyaabaha iyo walxaha caqligu waxay kudhaqmayaan ama soo maraan marinnadaas dareenka ah kuwaas oo bilaaba hawl gal mid ama in ka badan shanta shaqo ee maskaxda. Shanta shaqo ee maskaxdu waxay ku shaqeeyaan shanta dareeme iyo shanta xubnood ee garashada waxayna yihiin geedi socodka maaddada dhinaca maskaxda.
Afarta daraasadood ee fikraduhu waxay asal ahaan ka yimaadeen laba ilo: fikradaha ka soo baxa dibedda iyo fikradaha ka soo baxa gudaha. Waxaa la muujiyey sida saddexda xiisadood ee ugu horreeyay ee la magacaabay ay uga soo baxaan iyaga la'aantood, kiciyaan xarumahooda u kala baxa oo madaxa ugu soo baxaan. Dhammaan fikradaha noocan oo kale ah waxay u adeegaan sida sheyga iyo cuntada gala caloosha maskaxda uun sida cuntada jidhka lagu galiyo caloosha. Ka dib cuntada maskaxda waxay u gudubtaa marinka dheef-shiidka oo la mid ah kansarka laf-dhabarka, halkaas oo ay ku shaqeeyaan unugyada madaxa ee leh howlo isku mid ah kuwa ku jira caloosha iyo miskaha. Caloolka maskaxda (cerebellum) waa caloosha maskaxda, iyo isugeynta xuubka maskaxda ee loo yaqaan "cerebrum marinka" kaasoo maaddada loo maleynayo ay ka gudbeyso, habka dheef-shiidka iyo isugeynta, kahor inta aan loo dirin wejiga, isha, dhegta, sanka, ama afka, si buuxda dunida loogu aasaasay, iyada oo ujeedkeedu yahay wanaag ama shar. Marka aragtiyaha ama fikradaha laga soo helo saddexda xarumood ee hoose waxay ka yimaadeen il dibadeed waxayna u noqon karaan cunto ahaan caqliga si ay u qaabeeyaan.
Fikirka ka soo baxa gudaha wuxuu asal ahaan ka soo jeeddaa wadnaha ama madaxa. Hadduu qalbiga ku jiro, waa iftiin jilicsan oo joogto ah kaasoo shucuur jacayl aan caadi ahayn u leh wax kasta, laakiin kaas oo noqon kara kalgacal shucuureed isla markaana u gudbi kara isaga oo ka jawaabaya qaylada aadanaha, naasaha, haddii aan loo kicin sidii olol. himilada madaxa. Markii sidaas la soo saaray waa la falanqayn karaa, la isku dubbaridi karaa, loona dheelitiran karaa dhaqdhaqaaqa guud ee fikirka oo caddaynaya shanta geeddi-socod ee caqliga ee aan soo sheegnay. Shaqada shan-laab ee maskaxda ee dareenka ayaa markaa loo qaddarin doonaa oo la fahmi doonaa. Foomka fikirka ee ka soobaxa madaxa gudahiisa si dhif ah ayaa loogu yeeri karaa fikir maadaama uu si buuxda u dhismey iyada oo aan wax nidaam maskaxeed ah lagu dhaqaaqin. Isla mar ahaantaana muuqaalkeeda madaxa waxaa jira ficil gobolka ka dhaca salka hoose ee laf-dhabarta taasoo keenta in madaxa madaxa ka buuxdo nal. Iftiinkaan waxaa lagu fahmay dunida fikirka. Isha fikirka ee ka timaada qofku waa is-ammaanta ama Is-sarraynta. Fikirka noocan oo kale ah waxaa loogu yeeri karaa kaliya doonista qof nuurkiisa gaadhay oo xigmad ku gaadhay. Kuwa kale oo dhan waxay ku timaadaa si lama filaan ah, si qoto dheer, ama rajo weyn.
Maskaxdu ma ahan maskax; ma aha damac. Ka fikirku waa ficil isku xirnaanta rabitaanka iyo maskaxda. Dareenkaas waxaa lagu magacaabi karaa maskaxda hoose. Ka fikirka waxaa keena ficil ahaan rabitaanka maskaxda, ama maskaxda oo rabitaanka. Fekerku wuxuu leeyahay laba jiho; waxa la xidhiidha damaca iyo dareenka, waa rabitaanka, damaca, iyo himilada, iyo waxa maskaxda la xiriira himilooyinkeeda.
Cirkii buluugga ahaa ee buluugga ahaa ee cirka daruur daruur ahaanta u eg ayaa dabayl ku dhacay waxaana ku soo ifbaxaya duulaan aad u eg. Tan waxaa laga helayaa, qaabab ayaa soo ifbaxaya oo kordha oo noqda kuwa sii culus oo mugdi ah ilaa daruuraha oo dhami ay ka gudubto oo iftiinka qorraxda uu xirmayo. Roobab duufaano, daruuro iyo qaabab kale ayaa mugdi ku lumay, oo waxaa jabay toosh toosh. Hadday gudcurka mugdi sii jiro sii socdo, dhimashada ayaa ku faafi lahayd dhulka. Laakiin iftiinka waa ka sii madfac yahay gudcurka, daruuraha waxaa lagu sakhraamayaa roobka, iftiinka mar kale mugdiga ayuu sii daayaa, natiijada duufaantaana waa la arki doonaa. Fikradaha waxaa loo soo saaraa si la mid ah markii damacgu qaab yeesho maskaxda.
Unug kasta oo jidhka ka mid ah wuxuu ka kooban yahay maaddada iyo jeermiga fikirka. Soojiidashada iyo fikradaha dibedda waxaa laga helaa xarumaha galmada, aasaaska, iyo shucuurta; ur, dhadhan, cod, midabyo, iyo dareemo (taabasho), waxay jirka u marayaan albaabka dareenka iyada oo loo maro shanta xarumood ee caqliga; Maskaxda ayaa si isdaba joog ah u neefsata, isla mar ahaantaana dhaqdhaqaaq labanlaab ah laba jiho oo iska soo horjeeda, iyada oo loo marayo jirka oo dhan, oo markaa ku kicinaysa oo xorayn doonta jeermiga nolosha; Rabitaanku wuxuu siiyaa jihada nolosha ee ku kacda dhaqdhaqaaq la mid ah sida wadnaha oo kale, iyadoo laga helayo dariiqa wadadiisa markii ay kor u sii socoto. Haddii ay tahay fikradda xamaasad ba'an, damac, ama cadho, kaas oo gelitaanka iyo cunaqabataynta qalbiga ku jira, uumi, madluun, darruur u eg ayaa madaxa kor ugu fuuli doonta, waxay maskaxda gelin kartaa oo ay xidhi doontaa iftiinka sababta qalbiga ka timid. Dabadeedna duufaanka xanaaqa ayaa xanaaqi doona, fikirrada qarsoodiga ah sida hillaaca hillaaca ayaa u soo bixi doona, halka duufaanka jacaylku uu sii jirayo jacaylka indha la'aantu waa inuu ku adkaadaa; haddii ay sii socoto waalli ama dhimashadu waa natiijada. Laakiin sida dabiiciga ah, cadhada duufaanta noocaas ah ayaa dhaqso loo joojiyaa, natiijooyinkeedana waxaa loo arki karaa iyada oo la adeegsanayo sababta caqliga. Rabitaanka ah inuu gaadho wadnaha - haddii uu yahay mid indho la’aan ah waxaa lagu xakamayn karaa - wuxuu ku dhacaa olol midabbo kala duwan leh ilaa hunguriga, wuxuu ka bilaabmaa cerebellum iyo cerebrum halkaas oo ay ku hesho dhammaan walxaha caqliga ee ay ku jirto. geeddi-socodka dheef-shiidka, uummiyeynta, is-beddelka, horumarka, iyo dhalashada. Xarunta saytuhu waxay siisaa ur urin iyo adkayn, xarunta gustatory waxay u keentaa inuu noqdo mid xanaaqsan oo qadhaadh ama qoyaan leh, xarunta maqalku waxay u yeeraysaa qoraal adag ama cod macaan, xarunta muuqaalka ayaa siisa sawir waxayna ku kobcisaa iftiin iyo midab, xarunta caqliga ayaa ku abaalmarisa dareen iyo ujeedo, ka dibna waxay ku dhalatay dunida mid ka mid ah xarumaha madaxa oo ah hay'ad si buuxda u dhisan, habaar ama duco aadanaha. Waa cunugga maskaxda iyo rabitaanka. Noloshiisa nololeed waxay kuxirantahay abuuraheeda. (XNUMX) wuxuuna ka soobixiyaa dhexdeeda waxay ka cuntaan. Fikradaha aan helin nafaqada ku habboon inta lagu gudajiro howlaha uurka, ama kuwa horay u dhashay, waxay la mid yihiin qalfoofka ciridka, ama waxyaabo aan nooleyn, kuwaas oo si aan ula kac ahayn u warwareegaya ilaa ay ka gaarayaan jawiga qof aan damac la hubo ka qabin, inuu dhex maro iyo Maskaxdiisa uga soo baxday sidii cirfiid oo dhex maray guri madhan. Laakiin dhammaan fikradaha maanka ku abuuray maskaxdu waa carruurta maskaxdaas, oo mas'uul ka ah iyaga. Waxay u ururiyaan kooxo iyadoo loo eegayo dabeecadooda oo ay go'aamiyaan aayaha noloshooyinka mustaqbal ee abuurkooda. Sida cunugga, fikirka ayaa ku soo noqda si uu ugu noolaado waalidkiisa. Gelitaanka jawigiisa waxay ku dhawaaqeysaa jiritaankeeda dareen dareen u leh dabeecadeeda, una baahan fiiro gaar ah. Haddii maskaxdu diido inay madadaalo ama dhageysato sheegashadeeda waxaa ku qasbay sharciga wareegga inuu ka baxo illaa wareeggu oggolaanayo soo laabashadiisa. Xilligaan xoog ayaa loo lumiyaa qaab ahaanna wuu yar yahay. Laakiin haddii maskaxdu ubadiso ilmaha, waxay sii ahaaneysaa ilaa inta laga qaboojiyo oo la quudiyo ka dibna, sida cunugga oo damaciisa la dhergay, waxay u ordeysaa inay ku soo biirto saaxiibbadeeda cayaaraha oo ay boos u hesho codsadaha soo socda.
Fikirradu waxay ku yimaadaan mid ka mid ah rucubyo, daruuro. Saamaynta xukunka ee xiddigaha zodiacal, oo la xidhiidha mid ka mid ah toddobada mabaadi'da ayaa go'aamiya imaatinka fikirradiisa, iyo cabbirka wareegga soo laabashadooda. Sida uu nafaqeeyay fikirrada nooc ka mid ah, markii ay dib ugu soo laabteen nolosha nolosha ka dib, si waafi ah ayuu u xoojiyay, sidaas darteedna ay iyaga laftoodu wiiqeen awoodda iska caabinta maskaxdiisa iyo atamka jidhkiisa. ilaa ay ka muuqdaan fikradahaas, niyadda, shucuurta iyo xamaasadda, waxay leeyihiin awoodda iyo cabsida aan la xakamayn karin ee qaddarka. Fikirku waxa ay ku ururaan, xoojiyaan, dhalaaliyaan oo noqdaan qaabab, fal iyo dhacdooyin, nolosha qofka iyo sidoo kale qaranka. Sidaas awgeed waxaa si lama filaan ah u yimaadda dabeecadaha is-dilka, dilka, tuuganimada, damaca, iyo sidoo kale ficillada degdega ah ee naxariista iyo naf-hurnimada. Sidaas awgeed waxaa imanaya niyadda mugdiga, xanaaqa, xumaanta, niyad-jabka, shakiga iyo cabsida aan la hubin. Sidaas awgeed dhalashadu waxay ku timaaddaa adduunkan sifo naxariis leh, deeqsinimo, kaftan, ama degganaansho, iyo kuwa ka soo horjeeda.
Dadku fikir iyo dabeecad ayuu kaga jawaabaa isagoo maroorsanaya fikradihiisa si isdaba joog ah halka uu fiirinayo isagoo yaabban, oo aan ka fiirsaneyn waxa sababay. Dadku waxay ku fikiraan damac, xaasidnimo iyo xanaaq, iyo kulayl iyo xaraash dabeecadda iyo ninka ay wadaagaan. Binu-aadmiga ayaa fikirkiisa ku bixiya midhahena fikirkiisa, dabeecadduna waxay ku soo bixisaa farackeeda dhammaan noocyada dabiiciga ah sida carruurta fikirradiisa. Geedaha, ubaxyada, xayawaannada, xayawaanada, shimbiraha, waxay ku jiraan qaababkooda qaylo-dhaanta fikirradiisa, halka mid kasta oo ka mid ah dabeecadiisa kala duwan uu yahay muuqaal iyo ku takhasusid mid ka mid ah hamigiisa gaarka ah. Dabeecadda ayaa ku dhalata iyada oo loo eegayo nooca la bixinayo, laakiin fikirka dadku ayaa go'aamiya nooca, ninkuna wuxuu ku beddelaa fikirkiisa oo keliya. Tigers, baraar, digaaggo, digaag, iyo qoolleyda, waxay sii wadayaan inay muuqdaan ilaa inta ninku ku takhasusay dabeecadda fikirkiisa. Hay'adaha ku dhex nool nolosha jidhka xayawaanka waa inay lahaadaan dabeecaddooda iyo qaabkooda oo ay ka go'an tahay fikirka dadka ilaa naftooda ay ka fikiraan. Markaa uma baahnaan doonaan gargaarkiisa, laakiin waxay dhisi doonaan qaababkooda xitaa sida fikirka dadku hadda u dhiso naftiisa iyo kooda.
Sida lemniscate, bani-aadamku wuxuu taagan yahay adduunyada noumenal iyo ifafaalayaasha. Isaga oo maandooriyaha ah ayaa ku kala duwan sida maaddada ruuxiga ah oo ka muuqata dunidan jidh ahaaneed ee toddobada xaaladeeda ruux iyo sheyba. Nin ahaan, oo xarunta taagan, toddobadahan xaaladood ayaa is waafajin oo dib-u-noqdeen walxo. Waa turjubaan kaas oo siiya foomka waxa aan la arki karin markii uu oggolaado oo uu xoojiyo — isaga oo ka fekeraya. Wuxuu mowduuc adag ku beddelaa wax aan muuqan iyo mar kale u muuqda - had iyo jeer waa fikir. Markaa wuxuu ku sii socdaa geedi socodkiisa isbeddelka iyo hagaajinta, abuurista iyo kala dirida, baabi'inta iyo dhisidda jidhkiisa, xayawaannada iyo khudradda adduunka, astaamaha umadaha, cimilada dhulka, isbedelka qaaradaha, dhalinyarada iyo da'da iyo dhallinta oo dhan meertada - marwalba fikirka. Marka fikir ahaantiisa wuxuu ku fuliyaa qaybtiisa shaqada weyn ee wax ka beddelka illaa ay ka noqotid Feejignaan.